Azay Company Ltd.
လူကြီးမင်းသည် ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူနိုင်ရန် အွန်လိုင်းအသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ် သော – www.azay.com.mm – တွင် လည်းကောင်း၊ အွန်လိုင်း အသုံးမပြုလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ စတိုးဆိုင်များတွင်လည်း ကောင်း Azay မှတ်ပုံတင်စာရင်း (account) တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရမည်။
Customer အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် မှတ်ပုံတင် ဖောင်ပုံစံ၌ ဖော်ပြထားသော၊ လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ပေးအပ် ရမည် ဖြစ်ပြီး ဤစည်းကမ်းချက်များကို လက်ခံသဘောတူရမည်။
ဤစည်းကမ်းချက်များ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော အခြားအချက်များသည် ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရောင်းချရန် ကမ်းလှမ်းချက် မပါဝင်ပါ။ လူကြီးမင်းက ကုန် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ဝယ်ယူရန် အမှာစာတင်ပြပါက ဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းသည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။ အမှာစာကို လက်ခံကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အတည်ပြုချက်သည် လူကြီးမင်း၏ အမှာစာကို လက်ခံရရှိကြောင်း အတည်ပြုခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ကုန် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းချပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း လက်ခံခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှာစာကို ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း လက်ခံလိုက်သည်နှင့် လူကြီးမင်းက မှာယူထားသော ကုန် ပစ္စည်းများကို ပေးပို့ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိ လာပါ မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော ဓာတ်ပုံများသည် ပုံဖော်ပြသရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဈေးနှုန်း၊ အခွန် နှင့် ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဈေးနှုန်းများတွင် အစိုးရက ကောက်ခံသော အခွန်အခများ မပါဘဲ အခွန်မပါရှိကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြထားပါ မည်။ အစိုးရ ကိုယ်စား အခွန်ကောက်ခံပေးပါက အခွန်ပါရှိကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် customer များ အပါအဝင် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို အကြောင်းကြားရန် မလိုဘဲ သို့မဟုတ် အကြောင်းကြား ရန် တာဝန်မရှိဘဲ ကြော်ငြာထားသော သို့မဟုတ် customer များက ဝယ်ယူနိုင်သော ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဈေးနှုန်းများ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ဖော်ပြချက်များ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဈေးလျှော့ရောင်းချခြင်းတို့ကို မည်သည့် အချိန်၌ မဆို ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲရန် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
ကြော်ငြာထားသော သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် ကမ်းလှမ်းထားသော ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများသည် မှာယူသည့် အချိန်တိုင်းတွင် သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် ရရှိမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အာမခံခြင်းမရှိဘဲ ကျိုးကြောင်း သင့်လျော်သော အကြောင်းပြချက် တစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုခုအား လူကြီးမင်းထံ မရောင်းချနိုင်ပါက ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပေးရန် တာဝန် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါ။ လူကြီးမင်းက ကျေနပ်လက်ခံပါက အစားထိုးကုန်ပစ္စည်းကို ပို့ဆောင် ပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရောင်းချသော ကုန်ပစ္စည်း အရေအတွက် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် ခင်းကျင်းထားသော ကုန်ပစ္စည်း အရေ အတွက်ကို ကန့်သတ်နိုင်ခွင့် ရှိပြီး အချို့သော ကုန်ပစ္စည်းများကို အမြောက်အမြား မှာယူပါကလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုံးဖြတ် ချက်တစ်ခုတည်းဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးမည်/ မပို့ဆောင်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါမည်။
(ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဖော်ပြချက်၊ ဓာတ်ပုံများ နှင့် အသုံးပြုရန် လမ်းညွှန်ချက်များ အပါအဝင်) ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်း များသည် မှန်ကန် တိကျကြောင်း၊ ပြည့်စုံကြောင်း၊ ယုံကြည် စိတ်ချရကြောင်း၊ လတ်တလော အချက်အလက်များ ဖြစ် ကြောင်း သို့မဟုတ် အမှားအယွင်း မပါရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အာမ မခံပါ။ ဤစည်းကမ်းချက်များတွင် ကြီးလေးသော အမှားအယွင်း ပါရှိသည် သို့မဟုတ် စည်းကမ်းချက်များကို ကြီးလေးစွာ ဖောက်ဖျက်သည် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ် ဆိုက် ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော ဈေးနှုန်း သို့မဟုတ် အခြား အရေးကြီးသော အချက်အလက်များသည် မှားယွင်းသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံပါက အမှာစာများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရန် နှင့် အမှာစာများကို ပြန်လည် ပြင်ဆင် ရန် သို့မဟုတ် ပြန်အမ်းငွေ ရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
အနည်းဆုံးမှာယူရမည့် အရေအတွက်နှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း
www.azay.com.mm. တွင် မှာယူလိုပါက အနည်းဆုံး မြန်မာ ကျပ်ငွေ ၂၀,၀၀၀ ဖိုး မှာယူရမည်။
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အချို့သော မြို့နယ်များသို့ ပို့ဆောင်ခ မယူဘဲ အခမဲ့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့ ဟုတ်/ မဟုတ် သိရှိနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဆိုင်ခွဲများ ဖွင့်လှစ်ထားသော မြို့နယ်များတွင် လူကြီး မင်း၏ ဆန္ဒအလျောက် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဆိုင်ခွဲများမှ လာရောက်ယူဆောင်နိုင်ပြီး ထိုသို့ လာရောက်ယူဆောင်နိုင်ခြင်း ရှိ/ မရှိကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းက ပေးအပ်ထားသော လိပ်စာသို့ ကုန်ပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
ကုန်ပစ္စည်းများ အားလုံးကို ပို့ဆောင်ပေးပြီးလျှင် လူကြီးမင်းသည် မှာယူမှုကို စစ်ဆေး၍ လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ လူကြီး မင်း ဘက်မှ ပစ္စည်းများကို လက်ခံခြင်း မရှိပါက ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည် ယူဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပြီး လာရောက် ပို့ဆောင် ခဲ့ကြောင်း လူကြီးမင်းထံ အသိပေးပါမည်။ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ရန် လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ ထံ ထပ်မံ ဆက်သွယ်ရမည်။ ပို့ဆောင်မှုကို နောက်ထပ် တစ်ကြိမ် ပြန်လည် စီစဉ်ရပါက အပိုဆောင်း ကုန်ကျစရိတ်များ ကောက်ခံ ပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့မှ မထိန်းချုပ်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များကြောင့် ကုန်ပစ္စည်း မှာယူမှုများသည် နှောင့်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်ခြင်း ရှိလျှင် အဆိုပါ နှောင့်နှေးမှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှု အတွက် လူကြီးမင်းထံသို့ ပေးလျော်ရန် တာဝန်မရှိပါ။
လူကြီးမင်းသည် ကုန်ပစ္စည်း မပေးပို့မီ တစ်ရက်ကြိုတင်၍ ညနေ ၄ နာရီထက်နောက်မကျဘဲ လူကြီးမင်း၏ အမှာစာအား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း နှင့် ငွေပြန်အမ်းခြင်း
လူကြီးမင်းသည် ကုန်ပစ္စည်းကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ သေချာစွာ စစ်ဆေးပါရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းတွင် ပြဿနာ တစ်ရပ်ရပ်ရှိပါက လာရောက်ပို့ဆောင်သည့် အဖွဲ့သို့ ကုန်ပစ္စည်းကို ပြန်လည် အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ ပြဿနာများတွင် ကုန်ပစ္စည်း ပျက်စီးခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးတွင် ပြဿနာရှိခြင်း (ဥပမာ - လတ်ဆတ်မှု မရှိခြင်း) သို့မဟုတ် မျှော်မှန်း ထားသော ဈေးနှုန်း အတိုင်း မဟုတ်ဘဲ ပြောင်းလဲခြင်း အစရှိသည်တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
အများအားဖြင့် အစားအသောက် မဟုတ်သော ပစ္စည်းများ၊ ခြောက်သွေ့သော ပစ္စည်းများကို ပေးပို့ပြီးနောက် (၂၄) နာရီအတွင်း ပြန်လည် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အချို့သော ကုန်ခြောက်ပစ္စည်းများ၊ အေးခဲပစ္စည်းများ နှင့် အခြား ပုပ်သိုးပျက်ဆီးလွယ်သော ပစ္စည်းများကို ပစ္စည်းလာပို့သည့်အချိန်တွင် သေချာစွာ စစ်ဆေးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ပြန်လည်ပေးပို့လိုပါက တစ်ပါတည်း ကုန်ပစ္စည်းလာပို့သူနှင့် ပြန်လည်ထည့်ပေးရန် သတိပြုရပါမည်။
ကုန်ပစ္စည်းကို ပြန်လည်ပေးပို့ပါက ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူ တံဆိပ်အမှတ်အသား၊ ကတ်ပြား နှင့် အခြား အဆင်တန်ဆာများ ပါရှိရမည်။ ကုန်ပစ္စည်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားစဉ် ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ လက်ဝယ်တွင် ရှိနေစဉ် ကုန်ပစ္စည်း ပျက်စီးလျှင် လူကြီးမင်းထံမှ ပျက်စီးမှုအတွက် ကျသင့်စရိတ်ကို နုတ်ယူထားပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းကို ပေးပို့စဉ် ဝယ်ယူသူသည် ကုန်ပစ္စည်းကို မယူဘဲ ပြန်လည် အပ်နှံပါက လူကြီးမင်းအတွက် ငွေတောင်းခံလွှာမှ ကျသင့် ပမာဏကို နောက်အော်ဒါအသစ်တွင် နုတ်ပယ်ပေးပါမည်။ နောက်ပိုင်းရက်များတွင် ပြန်လည် ပေးပို့ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်း ပြခန်းသို့ တိုက်ရိုက် ပြန်လည် ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးတူ ပစ္စည်းချင်း လဲလှယ်နိုင်ပါသည် (သို့) နောက်အော်ဒါတွင် အလားတူပမာဏကို နုတ်ပယ်နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းက ပြန်လည်အပ်နှံသော ကုန်ပစ္စည်းသည် အထူးဈေးနှုန်း သို့မဟုတ် လျှော့ဈေးဖြင့် ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်း ဖြစ်လျှင် အထူးဈေးနှုန်းအပေါ် မူတည်၍ ပစ္စည်းလဲလှယ်နိုင်ပါသည်။
အခြားနည်းဖြင့် ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိလျှင် ပစ္စည်း ပေးပို့သည့်အချိန်၌ ငွေပေးချေရမည်။
သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းအတွက် ငွေအပြည့်အဝ မရရှိသေးသည့် အချိန်အထိ နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို မပေးပို့ရသေးသည့် အချိန်အထိ Azay သည် ကုန်ပစ္စည်းများကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ဝယ်ယူသူထံ လွှဲအပ်မပေးဘဲ ထိန်းသိမ်းထားပါမည်။ လူကြီးမင်းမှ ငွေအပြည့်အဝ မပေးချေရသေးသည့်အချိန်အထိ ကုန်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းခွင့်ရှိပြီး မည်သည့်အချိန်၌မဆို ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည် ရယူထားနိုင်ပါသည်။ ငွေပေးချေပြီးသည့် အချိန်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးနိုင်သည့် အလားအလာ သို့မဟုတ် ပျက်စီး နိုင်သည့် အလားအလာ နှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တို့ကို လူကြီးမင်းထံ လွှဲအပ်ပေးပါမည်။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် password ကို အသုံးပြုလျှင် password ကို လျို့ဝှက် ထိန်းသိမ်းထားရန် နှင့် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုခြင်းအပေါ် ကန့်သတ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ကွန်ပျူတာ အချင်းချင်း အချက်အလက် မျှဝေနိုင်သော စနစ်ကို အသုံးပြုလျှင် www.azay.com.mm. တွင် ဈေးဝယ်ယူပြီးပါက sign out လုပ်ရန် သတိပြုပါ။
လူကြီးမင်း၏ account သို့မဟုတ် password ၏ လုံခြုံမှုကို မည်သည့် နည်းဖြင့်မဆို ထိပါးလာသော ဖြစ်ရပ်ရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့ထံ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရမည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် လူကြီးမင်း၏ account လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လူကြီးမင်း၏ account အား ပိတ်ခြင်း၊ password ပြောင်းလဲခြင်း၊ လူကြီးမင်း၏ account ရှိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ကို ပယ်ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့် တောင်းရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို တောင်းဆိုခြင်း အစရှိသည်ဖြင့် ကျိုးကြောင်းသင့်လျော်သော ဆောင်ရွက် ချက် တစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ချက် အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိပါသည်။
လူကြီးမင်းသည် ဤစည်းကမ်းချက်များ သို့မဟုတ် တည်ဆဲ ဥပဒေများကို ဖောက်ဖျက်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်းထံ အသိပေးရန် မလိုဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျိုးကြောင်း သင့်လျော်သော ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုတည်းဖြင့် လူကြီးမင်း၏ account အား မည်သည့် အချိန်၌မဆို ရပ်စဲပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အနာဂတ်တွင် အသုံးပြုခြင်း မရှိစေရန် ပိတ်ဆို့ အရေးယူခွင့် ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ Account ကို ရပ်စဲစေကာမူ ဤစည်းကမ်းချက်များသည် ဆက်လက် အကျိုး သက် ရောက်နေစေရမည်။
Azay ၏ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ရောင်းချခြင်း၊ Azay ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် အက်ပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြု ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ အာမခံချက်များ ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အများဆုံး ခွင့်ပြု ထားသော အတိုင်းအတာအထိနှင့် ကန့်သတ်ချက် မရှိဘဲ ယင်းအာမခံချက်များအားလုံး နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း Azay မှ ငြင်း ဆိုပါသည်။ Azay သည် ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကိုယ်စားပြုမှုများ၊ စည်းကမ်းချက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ခံ ကတိများကို (အချက်အလက်များ ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေ အကျိုးသက်ရောက်၍ ဖြစ်စေ)၊ ပြဌာန်း ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ မည်သည့် ပုံစံဖြင့်မဆို ပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိပါ။ Azay သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ဒါရိုက်တာများ၊ အစု ရှယ်ယာရှင်များ၊ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် အခြား သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင် မှုများ ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် အက်ပလီ ကေးရှင်းများ သုံးစွဲခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်းသော တောင်းဆိုမှုများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ နစ်နာမှုများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ ကုန်ကျ စရိတ်များ၊ တရားရုံး အမိန့်များ သို့မဟုတ် အခြားကိစ္စများအတွက် တာဝန် မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုပါသည်။
ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယခင်က ပြုလုပ်ထားသော ဗားရှင်း/ဗားရှင်းများ (ရှိလျှင်) ယင်းတို့ကို ဤစည်းကမ်း ချက်များက ကျော်လွန်ပယ်ဖျက်ပြီး ဤစည်းကမ်းချက်များကိုသာ အတည်မှတ်ယူရမည်။ Azay သည် ဤစည်းကမ်းချက် များကို ၎င်း၏ ဆန္ဒဖြင့်၊ အကြောင်းကြားရန် မလိုဘဲ မည်သည့် အချိန်၌ မဆိုပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
ဤ ‘စည်းကမ်းချက်များ’ နှင့် ယင်းနှင့် သက်ဆိုင်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော အငြင်းပွားမှု တို့အား ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ဥပဒေများက လွှမ်းမိုးပြီး၊ အခြားဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ကွဲလွဲချက်ရှိစေကာမူ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့်အညီ အဓိပ္ပါယ် ကောက်ယူ၍ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိအောင် ဆောင်ရွက် ရမည်။
အကူအညီလိုအပ်ပါက သို့မဟုတ် မှာယူလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် [၀၉ ၇၇၀ ၇၆၀ ၈၈၈] သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ info@azay.com.mm. ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။